‘ए मेरो हजुर ३’को ट्रेलर रिलिज, अनमोलको डबल रोल ! (भिडियो) - १४ चैत्र २०७५, NepalTimes
‘ए मेरो हजुर ३’को ट्रेलर रिलिज, अनमोलको डबल रोल ! (भिडियो)
झरना थापा निर्देशित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको सो चलचित्रको ट्रेलर बिहीबार युट्युब रिलिज गरिएको हो ।
बुधबार साँझ नै निर्देशक थापाको जन्मदिनको अवसरमा पत्रकारलाई देखाइएको ट्रेलर विभिन्न प्राविधिक कारणले युट्युब रिलिज हुन सकेको थिएन ।
चलचित्रको ट्रेलरमा प्रेमदेखि कमेडीसम्म समेटिएको छ । अभिनेता अनमोल केसीलाई भने डबल रोलमा देख्न सकिन्छ । उनी सुपरस्टार गायक प्रेम र एक साधारण युवक धनश्याम महर्जनको चरित्रमा प्रस्तुत छन् । ट्रेलर हेर्दा उनी फिल्ममा डबल रोलमा रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । अनमोलको डेब्यू गर्ल सुहाना थापासँग लभ केमेस्ट्री पनि देख्न सकिन्छ ।
सलोन बस्नेत, अर्पण थापा, रेअर राई, रबिन्द्र झालगायतका कलाकारहरुले पनि ट्रेलरमा राम्रो ‘स्क्रिन स्पेस’ पाएका छन् । अनमोललाई टिजरमा झैँ ट्रेलरमा पनि ‘मेगास्टार’ को रुपमा सम्बोधन गरिएको छ । ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा अनमोलले ‘ए मेरो हजुर’ को ब्रान्डमा आबद्ध हुन पाउँदा खुसी महशुस गरेको बताए ।
यस अघि नै चलचित्रका ‘जिन्दगी नै भन्दिनँ’ र ‘परान’ बोलको गीतले चर्चा पाईसकेका छन् । फिल्मलाई सुनिल कुमार थापाले निर्माण गरेका हुन् । निर्देशक थापा र सुमन पौडेलको कथा रहेको फिल्ममा सञ्जय लामाको छायांकन र हिमाल केसीको द्वन्द्व निर्देशन छ । कविराज गहतराज, रामजी लामिछाने, प्रविन सिंह र राहुल शाहको कोरियोग्राफी रहेको फिल्ममा दिर्घ खड्काले सम्पादन गरेका छन् ।